PVC Dual Pipe Extrusion Line - China PVC Dual Pipe Extrusion Line mpamatsy, Factory –Jwell
Mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny savaivony sy ny fivoahan'ny fantsona, misy karazany roa ny extruders kambana manokana an'ny SJZ80 sy SJZ65 tsy voatery; ny sodina roa maty dia mizara mitovy ny vokatra azo, ary ny hafainganam-pandehan'ny fantsom-pamokarana dia vita plastika haingana;
Ny boaty fanamafisam-peo avo lenta avo lenta dia azo fehezina misaraka, ary ny fiasa fanitsiana dia mety amin'ny dingan'ny famokarana;
Masinina fanapahana vovoka, fanaraha-maso tsy miankina tsy miankina volo, hafainganam-pandeha, halavany fanapahana marina. Ny fametahana pneumatika dia manala ny filàna fanovana fametahana. Miaraka amin'ny fitaovana chamfering tsy voatery.
Rafitra fanovana efijery hydraulic
XPS tsipika extrusion
HDPE Sodina famatsian-drano, Sodina famatsian-tsolika, Pipe fampiasa simika PP ary fantsom-pamokarana fantsom-pifandraisana elektrika MPP